मानव र वातावरणबीचको सम्बन्ध सन्तुलन भए मात्रै मानवजिवनले सार्थकता पाउने-उपमेयर खातुन : Birgunj's No. 1 News Portal
प्रदेश २ समाज
२०७६, १० पुष बिहीबार ०६:१० Dainik Birgunj	0 Comments
राजन बानिया, पोखरिया ९ पुस । स्माइल फर मिलियन्स नामक संस्थाको आयोजनामा आज पर्साको सखुवा प्रसौनि गाउपालिका वडा न. ५ महुवनमा शान्ति र लैगिंक वातावरण सभा सम्पन्न भएको छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पोखरीया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुनले मानव र वातावरणबिचको सम्बन्ध सन्तुलन भए मात्रै मानव जिवनले सार्थकता पाउने धारणा राख्नुभएको छ । अँझै पनि समाजमा लैंगिक हिंसा तथा बिभेदीकरण जस्ता कुरीतीहरु जिवितै रहेकोमा दुखेसो पोख्दै यसको अन्त्यका लागि शिक्षामा शसक्तिकरण भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सोही अवसरमा बिशिष्ट अतिथि पटेर्वासुगौलि गाउपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतो थारुले बिभेद विरुद्धको अभियान सबैलै आ आफ्नो घरबाट शुरु गर्नेपर्ने बताउनुभयो । घरमै छोरा र छोरी बिचको बिभेदको अन्तय नभए सम्म समाजमा बिभेद रही रहने बताउँदै छोरा वा छोरीको जन्म हुने बित्तिकै एउटा बिरुवा रोप्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दलित समुदायको बिकासका लागि पिस फर दलित फाउण्डेशन र यु आर आई को सहकार्यमा सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । पिस फर दलित फाउण्डेशनका अध्यक्ष मनोज रामको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा स्माइल फर मिलियन्सका अध्यक्ष दिपक कुमार, युवा राजदुुत अभिषेक कपुर, सामाजिक मिडिया प्रचारक त्रिलोचन भल्ला, यात्राद्वारा महिला शसक्तिकरण नेपालकी अध्यक्ष सजना भडेल, सदस्यद्वय मनिषा धिताल, उदय खड्का, बालअधिकारकर्मी ज्योति साह लगायतले वातावरण प्रदुषण रोकी लैंगिक हिंसा मुक्त शान्त समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सबैले सहभागीले विश्वमा शान्ति रहेमा पनि जोड दिए, दलितको सामाजिक स्वतन्त्रता, दलित माथिको विभेद अन्त्य र राजनीतिमा सहभागिता नभएमा समाजमा शान्ति हुदैनन्, कार्यक्रममा वडा न. ५ का अध्यक्ष रुपलाल यादब, स्थानिय दलित अगुवा गणेश महरा,जदु प्रसाद साह अशोक राम, महिला ज्योति कलवार, स्थानियबासि लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
← पुस १० गते बिहीबार सूर्यग्रहण लाग्ने
छिपहरमाइ गाउँपालिका प्रमुख मनोज गुप्ताद्वारा दाउरा वितरण →
केन्द्र सरकारले रौतहटको किसानहरुको माग पुरा नगरे आफु स्वंयम धर्नामा बस्ने मन्त्री यादवको चेतावनी
२०७७, ११ आश्विन आईतवार २०:०५ दैनिक वीरगञ्ज 0
अनाथालयमा २४ कुण्डीय गायत्री महायज्ञ आरम्भ
२०७७, १ चैत्र आईतवार २१:३९ दैनिक वीरगञ्ज 0
भेडियाहीको शितलामाई मन्दिरको सांसद प्रदिप यादवले गरे शिलान्यास
२०७६, १७ फाल्गुन शनिबार १७:३२ दैनिक वीरगञ्ज 0